मुक्तिनाथ बैंकका २ नयाँ कर्जा योजना संचालनमा Bizshala -
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले फरक प्रकृतिका दुई आकर्षक कर्जा योजनामा संचालनमा ल्याएको छ ।
देशकै टप विकास बैंक, मुक्तिनाथले आवासीय प्रयोजनका लागि आफ्नो वा एकाघर सदस्यको स्वामित्वमा रहेको घरघडेरी तथा फ्ल्याट वा अपार्टमेन्टमा भएको स्व–लगानीमा डेब्ट लेभरेज लिने गरी इक्वीटी फाइनान्सिङ गरिने र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जालाई पुनः लगानी गर्न सकिने गरी मुक्तिनाथ घरपूँजी कर्जा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
घरपूँजी कर्जा आकर्षक ब्याजदरमा १५ वर्षका लागि लिन सकिने बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी, बैंकले मुक्तिनाथ सरल व्यवसायिक कर्जा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस कर्जा विभिन्न व्यवसाय स्थापना गर्न, आधुनिकीकरण गर्न र साथै व्यवसायमा हाल भइरहेको पूँजीगत तथा चालुपूँजी स्व–लगानीमा फाइनान्सियल लेभरेज लिने गरी उद्योग, व्यापार एवम् सेवामूलक संस्था वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने संरचना÷पूर्वाधारमा लाग्ने पूँजीगत खर्चहरु परिपूर्ति र मौज्दात, आसामी, पेश्कीलगायत स्थायी प्रकृतिका चालुपूँजी आवश्यकता पूरा गर्न तथा दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यशील पूँजीको लागि प्रदान गरिने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले हाल ४२ जिल्लामा १३४ वटा शाखाहरुमार्फत ग्राहकका आवश्यकताबमोजिमका सबै प्रकारका बचत, निक्षेप तथा कर्जा सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
साथै, प्रविधिमा आधारित रही मोबार्ईल बैंकिङ्ग, क्यूआर पेमेन्ट, एटिएम, अनलाईन बैंकिङ्गलगायतका सेवाहरु पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुबीच ब्याजदर घटाउने विषयमा सहमति भएसँगै...
बढेको लकडाउन अवधिभर मुक्तिनाथ बैंकको कुन शाखा कुन दिन
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि...
नयाँ वर्षमा कुन-कुन दिन बैंकरले विदा पाउँछन् ? (सूचिसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले २०७७ सालको बैंकिङ विदाको...
गभर्नर सिफारिसमा केरमेटको खेल, अन्तिम अवस्थामा खनालको नाम आउट
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री निकट स्रोतले सोमबार बिहान जानकारी...
बैंकिङ फ्रड हुनसक्ने भन्दै एनबिएद्वारा व्यक्तिगत विवरण
काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन(एनबिए)ले कोरोना संकटको बेला...
महाप्रसाद अधिकारी: सन्तुलित भूमिका र खतिवडाको साथले चम्किएका
काठमाण्डौ । धेरै कमलाई मात्र लागेको थियो नेपाल राष्ट्रबैंकको...
महाप्रसाद बने राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर
काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा महाप्रसाद...
एकभन्दा धेरै बैंकमा खाता छन् ? हुन सक्छन् यी ६ नोक्सानी
काठमाण्डौ । विविध कारणले गर्दा ग्राहकले एकभन्दा बढी बैंकमा खाता...